August 8, 2016 – AYA Bank
24/7 Contact Center +95 1 231 7777 info@ayabank.com
Day: August 8, 2016
Ayeyarwady Foundation မှ ညောင်တုန်းနှင့် ပန်းတနော်မြို့ရှိ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအားသွားရောက်လှူဒါန်း။
Posted on August 8, 2016 February 16, 2017 by Hnin Phyu
ဦးဇော်ဇော်နှင့်အဖွဲ့သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၈)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ညောင်တုန်းမြို့၌ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးမန်းဂျော်နီနှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအား သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စရပ်များအား ရင်းရင်းနှီးနှီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် ကနဦးလှူဒါန်းမှု အဖြစ် ငွေကျပ်သိန်း (၅၀ဝ)၊ ဆန်အိတ် (၂,ဝ၀ဝ)၊ ဆီပိဿာချိန် (၁၀,ဝ၀ဝ)နှင့် ရေဘေးကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ပီနံအိတ်ခွံများကို တာဝန်ရှိသူများနှင့်ညှိနှိုင်းလှူဒါန်းပေးလျက် ရှိသည်။ သြဂုတ် လ(၆)ရက်နေ့နှင့်(၇)ရက်နေ့များကလည်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အောင်လံမြို့နှင့်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဇလွန်မြို့တို့တွင် ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ မုန့်ခြောက် အစရှိသည့် စားနပ်ရိက္ခာများ လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ရေဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရန် ပီနံအိတ်ခွံများကိုပါ လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။ သြဂုတ်လ(၈)ရက်နေ့တွင် ညောင်တုန်း၊ ပန်းတနော် စသည့်မြို့နယ်များရှိ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းအနေနှင့် ညောင်တုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်[…]
Posted in AYEYARWADY FOUNDATION Leaveacomment
Covid-19 ကာကွယ် ကုသရေး ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဆက်လက် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိ
အင်းလေးကန်ဒေသ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် စက်ယန္တရားဖြင့် (၃)နှစ်ကျော်ကြာ ပံ့ပိုးပေးခဲ့
မိဘမဲ့ ကလေးငယ်များနှင့် အဘိုးအဘွားများအတွက် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းမှ ပံ့ပိုးကူညီ
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန (ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း) နှင့်ဧရာဝတီဘဏ်တို့ ပူးပေါင်း၍ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိမြို့နယ်များ၏ မီတာဘေလ်များကို online မှ ပေး‌ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် YESC ရုံးချုပ်၌ လက်မှတ်ရေးထိုး
မြဝတီနှင့် ရမည်းသင်းတို့မှ Quarantine ဝင်နေရသူ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ အတွက် လိုအပ်သည်များ ပံ့ပိုး
Events Select Month July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 February 2019 January 2019 December 2018 October 2018 September 2018 August 2018 June 2018 March 2018 February 2018 December 2017 November 2017 October 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 April 2014 December 2013 September 2013 August 2013 June 2013 May 2013
No. 416, Mahabandoola Road, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.
24/7 Contact Center
01 -231 7777
© 2020 AYA Bank.